Ugu Dambeyn Salman Khan 22 Saacadod Oo Flight Ah Kutagi Doono Maldives Si Uu Oga Qeyb Qaato Xaflada Dhalasho Ee Ahil! - iftineducation.com
iftineducation.com – mardhow waxaan idin la wadaagnay familka Salman Khan oo kusugan Maldives ayagoo ugu dabaal dagaya xaflada dhalashadii koowad ee Ahil Sharma dhamaan familka si farxad leh ayee udabaal dagayan ayagoo wada dhan.
balse hal qof ayaa kamaqnaa waana Super Star Salman Khan kaaso kusugnaa Austria asigoo halkaas kuduubaya filimkiisa TigeR Zinda Hai, hadaba taagerayasha iyo dhamaan dadka ayaa isla magac hayen in salmaan kubiiri doono dadkaas mesha kudabaal dagayan iyo inkale.
ugu dambeyn Salu kama ahaan karowiilka uu abtiga u yahay dabaal daga xafladisa waayo aadbu ujecelyahay wuxuuna ugu yeera Super Sharma.
goobta waxaa kusugan Salman saaxiibtiisa Lulia Vantur sido kale Arbaz Khan, Sohil Khan Amrita Arora iyo dhamaan familka lama maqna kaliya salu ayaa maqnaa asna hada wuuba usoo socdaa.
Flight ka inta uusoyahay ayuu dhararaya Salu xiisaha uu uqabo wiilkisa uu abtiga u yahay taaso kaliftay in saacado kooban uu waqti lasooo qaato dhamaan reerkisa.